Họtelu Krakow City | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | ulo, General, Poland
Krakow bụ otu n'ime obodo kacha ochie na nke kacha mkpa na Poland, ịbụ taa ezigbo njem nleta. Ọ bụ n'ihi nke a mere na ọtụtụ narị mmadụ na-ahọrọ obodo ahụ dị ka ebe ezumike kwa afọ, si otú a na-amalite ịchọ ụlọ nkwari akụ zuru oke ịnọ mgbe ị na-eleta isi obodo.
Anyị ga-ahụ ụfọdụ nlegharị anya yana kwa nke kachasị mma hotels iji nọrọ na Polish obodo Krakow. Yabụ anyị nwere ike ịmatakwu ebe mara mma obodo a nwere ma tinye ya na ndepụta anyị nke ebe ọhụụ aga-eleta.
1 Kedu ihe anyị nwere ike ịhụ na obodo Krakow
2 Ebee ka ịnọ na Krakow
3 Hotel Unicus Obí
5 Tlọ nkwari akụ Balthazar
Kedu ihe anyị nwere ike ịhụ na obodo Krakow
The Old City bụ otu n'ime ebe kachasị adọrọ mmasị na obodo a na ebe isi ihe mmasị dị. Ọ bụ na mpaghara ebe ị nwere ike ịhụ ọmarịcha ahịa na obosara Market Square, ebe lolọ Nzukọ Ulo, Basilica nke Santa María na Halllọ Nzukọ Obodo. On a elu ebe bụ Nkume Wawel na Katidral. Ebe ọzọ na-adọrọ mmasị ileta bụ otu ụzọ ochie ndị Juu nke Ndị Juu hiwere na narị afọ nke XNUMX nke a maara dị ka Kazimierz. N'ime ya ị ga-ahụ ụlọ nzukọ ma ọ bụ Ebe Ngosi Ihe Mgbe Ochie. Taa, ọ bụkwa ebe ọgbara ọhụụ na arụzigharị. Na obodo a ị nwekwara ike ịga ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke Oskar Schindler, onye ọchụnta ego nke zoro ezo chebe ndụ ọtụtụ puku ndị Juu site na azụmahịa ya.
Ebee ka ịnọ na Krakow
Otu n'ime ebe kachasị mma ịnọ obodo bụ ebe akụkọ ihe mere eme. Karịsịa n'ihi na ọ bụrụ na anyị nọrọ na mpaghara ochie anyị nwere ike ịhụ mpaghara ndị nwere mmasị na obodo ahụ n'ụzọ dị mfe, na-enweghị ọtụtụ njem. N'ime obodo enwere ụlọ oriri na ọ interestingụ interestingụ na-atọ ụtọ, n'agbanyeghị na enwere ike ịnwe nhọrọ nnabata ndị ọzọ dịka ụlọ ma ọ bụ ụlọ mbikọ ọnụ ala. Oge a anyị ga-ahụ ụfọdụ n'ime ụlọ kacha mma n'obodo.
Hotel Unicus Obí
Hotellọ nkwari akụ a dị obere mita site na Basilica nke Santa Maria, na obodo ochie. Ọ bụ ụlọ nkwari akụ nke oge a ma mara mma nke nwere ụlọ nri abụọ, ebe ị nwere ike ịnwale nri Italiantali ma ọ bụ Polish. Ma ụlọ nkwari akụ a pụtara ìhè karịa n'ihi na ọ nwere spa ma ọ bụ ebe nchekwa ahụike ya. Na spa ebe ọbịa nwere ike itinye mmiri na ọdọ mmiri, zuru ike na ala loungers, nwee obi ụtọ ịhịa aka n'ahụ ma ọ bụ gaa sauna. Ha nwekwara mgbatị ahụ iji mee ka ị na-arụsi ọrụ ike ma na-enye ọtụtụ ọgwụgwọ ihu na ahụ iji mechie onwe gị. Ezinụlọ ga-enwe ọrụ nlekọta nwa ma ndị na-azụ ahịa nwere ime ụlọ. Ime ụlọ ya pụtara ìhè maka ụda na-anọpụ iche na ịdị mma, yana nkasi obi dị ukwuu na mbara. Suites dị saa mbara, yana ebe oche, ebe ịsa ahụ, na ebe a na-eme tii / kọfị. Na mgbakwunye, ọ bụ ụlọ nkwari akụ nke nwere ebe a na-adọba ụgbọala ka ị ghara ichegbu onwe gị gbasara ụgbọ ala gị.
Hotellọ nkwari akụ a nwere kpakpando ise nwere ihe dị iche na ịnọ na a Renaissance ụlọ dị na etiti akụkọ ihe mere eme. Ihe ịchọ mma ya na-agwakọta vintage na nke dịpụrụ adịpụ na nke oge a, nke nwere uko ụlọ na ọkụ. Agbanyeghị, ime ụlọ ahụ nwekwara ime ụlọ ịwụ marble ọgbara ọhụrụ, njikọ Internetntanetị na telivishọn. Na teres ị pụrụ ịnụ ụtọ ịtụnanya panoramic echiche nke obodo na o nwere àgwà ụlọ oriri na ọ recommendedụ recommendedụ na-atụ aro na Michelin Guide. N'aka nke ọzọ, mpaghara spa ya na-eju anya, nwere ọdọ mmiri ime ụlọ nke dị na mpaghara okpuru ulo, nwere ogwe brik ochie. Hotellọ nkwari akụ a nwekwara spa zuru oke maka ịhịa aka dị iche iche, ọgwụgwọ mma na mgbatị ahụ. Hotellọ nkwari akụ ahụ dị nso na Wawel Castle nke ọ na-enye echiche.
Tlọ nkwari akụ Balthazar
Tlọ nkwari akụ Balthazar dịkwa nso na Castle Wawel. Hotellọ nkwari akụ a nwere mara mma na eclectic mma nke na-elekọta nkọwa niile. A na-eji ihe ọgbara ọhụrụ na nke ochie agụpụta ụlọ ndị ahụ n'otu n'otu. Ha sara mbara na obere minibar na TV dị larịị. Fọdụ nwere ụlọ ha mara mma nke ọma. Hotellọ nkwari akụ a na-enye ọmarịcha ọrụ, na-ahazi njem ndị dị nso dịka nke a na-egwupụta nnu. Ndị ọbịa nwekwara ike ịhịa aka n'ahụ ma rie nri dị ụtọ n'ụlọ nri Polish.
Hotellọ nkwari akụ a ọ dị na mpaghara kachasị ndụ na ọdụdụ n'obodod, na ebe bụ ebe ochie nke ndị Juu. Maka ndị chọrọ ịchọpụta mpaghara ọzọ dị na Krakow. Hotellọ nkwari akụ a nwere ọrụ ndị na-adọrọ mmasị, dịka ịnyịnya ígwè na-agagharị n'obodo. Ọ nwekwara atụmatụ mgbatị ahụ na mpaghara mbara ala. Ndi ọbịa gha ezukọ na ebe ezumike a ma rie nri uto ya. Ọ na-anọchi anya nnukwu nri ụtụtụ ya ma na-enyefe ọrụ na ọdụ ụgbọ elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Họtelu ndi di na Krakow
Ezcaray, obere ime obodo